China Stainless steel 45/60/90/180 Degree တံတောင်ဆစ် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |CZ IT
အတုပြုလုပ်ထားသော Blind Flange
Stainless Steel 45/60/90/180 Degree Elbow
အမည်: ပိုက် Rlbow
စံသတ်မှတ်ချက်-ANSI B16.9၊ EN10253-2၊ DIN2615၊ GOST17376၊ JIS B2313၊ MSS SP 75 စသည်ဖြင့်
တံတောင်ဆစ် : 30° 45° 60° 90° 180°, etc
ပစ္စည်း- သံမဏိ၊ Duplex သံမဏိ၊ နီကယ်သတ္တုစပ်။
နံရံအထူ-SCH5S၊ SCH10၊ SCH10S ၊STD၊ XS၊ SCH40S၊ SCH80S၊ SCH20၊ SCH30၊ SCH40၊ SCH60၊ SCH80၊ SCH160၊ XXS၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားပြီး စသည်တို့ဖြစ်သည်။
မျက်နှာပြင်ကုသမှုsand blasting၊ roll blasting၊ အချဉ် သို့မဟုတ် ပွတ်ခြင်း။
အဆုံး:bevel end ANSI B16.25
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်-ချောမွေ့စွာ သို့မဟုတ် welded
အရွယ်အစား 1/2"-36" ချောမွေ့စွာ၊ 6"-110" ချုပ်ရိုးဖြင့် ဂဟေဆော်ထားသည်။
စံ ANSI B16.9၊ EN10253-4၊ DIN2605၊ GOST17375-2001၊ JIS B2313၊ MSS SP 75၊ စံမဟုတ်သော စသည်ဖြင့်
နံရံအထူ SCH5S၊ SCH10၊ SCH10S ၊STD၊ XS၊ SCH40S၊ SCH80S၊ SCH20၊ SCH30၊ SCH40၊ SCH60၊ SCH80၊ SCH160၊ XXS ၊စိတ်ကြိုက် နှင့် စသည်တို့
ဘွဲ့ 30° 45° 60° 90° 180°၊ စိတ်ကြိုက်၊ စသည်တို့
အချင်းဝက်မျဉ်း LR/long radius/R=1.5D၊SR/Short radius/R=1D သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
အဆုံး Bevel end/BE/buttweld
အပေါ်ယံ ချဉ်ခြင်း၊ သဲလှိမ့်ခြင်း၊ ပွတ်ခြင်း၊ မှန်ပေါ်လစ်နှင့် စသည်တို့
ပစ္စည်း အစွန်းခံသံမဏိ:A403 WP304/304L, A403 WP316/316L, A403 WP321, A403 WP310S, A403 WP347H, A403 WP316Ti, A403 WP317, 904L၊1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254Mo နှင့် စသည်တို့
Duplex stainless steel-UNS31803၊ SAF2205၊ UNS32205၊ UNS31500၊ UNS32750၊ UNS32760၊ 1.4462၊1.4410၊1.4501 နှင့် စသည်တို့
နီကယ်သတ္တုစပ်inconel600၊ inconel625၊ inconel690၊ incoloy800၊ incoloy 825၊ incoloy 800H၊ C22၊ C-276၊Monel400၊ Alloy20 စသည်တို့။
လျှောက်လွှာ ရေနံဓာတုလုပ်ငန်း၊ လေကြောင်းနှင့် အာကာသလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်ငွေ့အိတ်ဇော၊ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး၊ရေကုသမှု စသည်တို့
အားသာချက်များ အဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာ၊ ပေးပို့ချိန်ပိုမိုမြန်ဆန်၊ အရွယ်အစားအားလုံး၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။
White Steel တံတောင်ဆစ်တွင် သံမဏိတံတောင်ဆစ်(ss elbow)၊ super duplex stainless တံတောင်နှင့် နီကယ်သတ္တုစပ်စတီးတံတောင်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
တံတောင်ဆစ်သည် ဦးတည်ထောင့်၊ ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားများ၊ အလျားနှင့် အချင်းဝက်၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ၊ တူညီသောတံတောင်ဆစ် သို့မဟုတ် တံတောင်ဆစ်လျှော့ချခြင်းမှ ကွဲပြားနိုင်သည်။
45/60/90/180 ဒီဂရီ တံတောင်ဆစ်
ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း၊ ပိုက်လိုင်းများ၏ အရည်လမ်းကြောင်းအရ တံတောင်ဆစ်ကို ၄၅ ဒီဂရီ၊ ၉၀ ဒီဂရီ၊ ၁၈၀ ဒီဂရီ၊ ၄၅ ဒီဂရီ၊ တံတောင်ဆစ်ကို ဒီဂရီအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။အထူးပိုက်လိုင်းအချို့အတွက် 60 ဒီဂရီနှင့် 120 ဒီဂရီလည်းရှိသည်။
Elbow Radius ဆိုတာ ဘာလဲ။
တံတောင်ဆစ်အချင်းဝက် ဆိုသည်မှာ ကွေးကောက်သော အချင်းဝက်ကို ဆိုလိုသည်။အချင်းဝက်သည် ပိုက်အချင်းနှင့် တူညီပါက၊ ၎င်းကို အချင်းဝက်တံတောင်၊ SR elbow ဟုလည်း ခေါ်သည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် low pressure and low speed pipelines အတွက် ဖြစ်သည်။
အချင်းဝက်သည် ပိုက်အချင်း R ≥ 1.5 Diameter ထက် ကြီးပါက၊ ၎င်းကို ဖိအားမြင့် ပိုက်လိုင်းများအတွက် အသုံးပြုသည့် ရှည်လျားသော အချင်းဝက် (LR Elbow) ဟုခေါ်သည်။
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကမ်းလှမ်းထားသော ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းအချို့ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
သံမဏိတံတောင်ဆစ်- Sus 304 sch10 တံတောင်ဆစ်၊316L 304 တံတောင်ဆစ် 90 ဒီဂရီ ရှည်လျားသော အချင်းဝက် တံတောင်ဆစ်၊ 904L တံတောင်ဆစ်တို
အလွိုင်းစတီးတံတောင်ဆစ်- Hastelloy C 276 တံတောင်ဆစ်၊ အလွိုင်းတံတောင်ဆစ် 20
စူပါနှစ်ထပ်စတီးတံတောင်ဆစ်-Uns31803 Duplex Stainless Steel 180 ဒီဂရီတံတောင်ဆစ်
1. ANSI B16.25 အရ Bevel အဆုံး။
2. သဲမလှိမ့်ခင် အရင်ဆုံး ကြမ်းတမ်းတဲ့အရောင်တင်ပြီးရင် မျက်နှာပြင်က အများကြီး ချောမွေ့သွားမှာပါ။
3. lamination နှင့် cracks မပါဘဲ။
5. မျက်နှာပြင်ကုသမှုသည်ချဉ်ခြင်း၊ သဲလှိမ့်ခြင်း၊ ဖျာချော၊ မှန်ပွတ်နိုင်သည်။သေချာတာကတော့ ဈေးနှုန်းက မတူပါဘူး။သင်၏ရည်ညွှန်းချက်အတွက်၊ သဲလှိမ့်သောမျက်နှာပြင်သည် လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။သဲလိပ်၏စျေးနှုန်းသည် ဖောက်သည်အများစုအတွက် သင့်လျော်သည်။
1. Dimension တိုင်းတာမှုများ၊ အားလုံးသည် standard tolerance အတွင်း။
2. အထူသည်းခံမှု-+/-12.5% ​​သို့မဟုတ် သင့်တောင်းဆိုမှုအပေါ်။
4. PT၊ UT၊ X-ray စမ်းသပ်မှု
5. ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံပါ။
6. ထောက်ပံ့ရေး MTC၊ EN10204 3.1/3.2 လက်မှတ်၊ NACE။
7. ASTM A262 အလေ့အကျင့် E
အမျိုးမျိုးသော အမှတ်အသားပြုခြင်းလုပ်ငန်းသည် သင့်တောင်းဆိုချက်တွင် ရှိနိုင်ပါသည်။သင်၏ LOGO အမှတ်အသားကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံပါသည်။
1. ISPM15 အရ အထပ်သားအိတ် သို့မဟုတ် အထပ်သားပြားဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။
2. အထုပ်တစ်ခုစီတွင် ထုပ်ပိုးမှုစာရင်းကို ထည့်ပါမည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့သည် အထုပ်တစ်ခုစီတွင် သင်္ဘောအမှတ်အသားများကို တင်ပါမည်။အမှတ်အသား စကားလုံးများသည် သင့်တောင်းဆိုမှုတွင် ရှိနေပါသည်။
4. သစ်သားထုပ်ပိုးပစ္စည်းများအားလုံးကို မီးခိုးမထွက်ပါ။
သံမဏိပိုက်တံတောင်ဆစ်သည် အရည်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲရန်အတွက် ပိုက်စနစ်တွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းကို တူညီသော သို့မဟုတ် ကွဲပြားသော အမည်ခံအချင်းများဖြင့် ပိုက်နှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် ပိုက်ကို 45 ဒီဂရီ သို့မဟုတ် 90 ဒီဂရီသို့ ဦးတည်သွားစေရန် အသုံးပြုသည်။
တံတောင်ဆစ်သည် ဦးတည်ထောင့်၊ ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားများ၊ အလျားနှင့် အချင်းဝက်၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအထိ ဖြစ်နိုင်သည်။
Direction Angle ဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။
valve body material အရ၊ ၎င်းတွင် stainless steel၊ carbon steel နှင့် alloy steel elbow ပါရှိပါသည်။
316l 304 တံတောင်ဆစ်
45 Deg Long Radius တံတောင်ဆစ်
45 Deg Short Radius တံတောင်ဆစ်
၄၅ ဒီဂရီ တံတောင်ဆစ်
45 Degree Short Radius ပိုက်တံတောင်ဆစ်
90 Deg တံတောင်ဆစ်
90 Deg Short Radius တံတောင်ဆစ်
90 ဒီဂရီ တံတောင်ဆစ်
တရုတ် 90 ဒီဂရီ တံတောင်ဆစ်
Dn150 90 ဒီဂရီ တံတောင်ဆစ်
Fittings တံတောင်ဆစ်ကို လျှော့ချခြင်း။
Hastelloy C 276 တံတောင်ဆစ်
Pipe Fittings တံတောင်ဆစ်
Stainless Steel 180 ဒီဂရီ တံတောင်ဆစ်
Stainless Steel တံတောင်ဆစ်
Sus 304 တံတောင်ဆစ်
Welding Fitting တံတောင်ဆစ်
သန့်ရှင်းရေး စတီးလ် အင်္ကျီ
Sanitary Stainless Steel တံတောင်ဆစ်
Black Steel Pipe 90 Deg Elbow